Mpanamboatra fonosana fonosana Sakafo China Vaccum | mpamatsy | Leadpacks
Kitapo fonosana sakafo Vaccum
Horonan-tsarimihetsika / horonan-tsarimihetsika fonosana mandeha ho azy
Kitapo akanjo fanantona
Kitapo fisaka azo ovaina
Kitapo mihodina amin'ny fivarotana lehibe
Kitapo mihodina tsy azo ovaina
Kitapo miantsena Oxo-biodegradable
Ny sakafo fonosana vacuum dia manampy amin'ny fitazomana ireo singa vaovao sy vonona hampiasaina.
Ity kitapo banga ity dia manamora ny fitahirizana voankazo sy legioma vaovao ary koa hena sy akoho amam-borona. Singa iray lehibe amin'ny fandrahoan-tsakafo sous vide, kitapo fonosana banga no tsy maintsy ananana ao an-dakozia izay manantena ny hanitatra ny safidin'izy ireo hanisy lovia sous vide. Tsara koa ny mitahiry kitapo fonosana banga ho an'ny filanao fitahirizana sakafo!
● Mety amin'ny fitehirizana sakafo maharitra
● Fahazavana, hamandoana, barazy ôksizenina ary fanoherana ny fijanonana
● Raha te hanana vokatra tsara indrindra dia mitahiry sakafo ambany-hamandoana
● Kitapo tombo-kase hafanana ho fiarovana tsara indrindra
● Ny sakana amin'ny rivotra dia mitazona ny fihavaozana sy ny tsiro, fofona ary ny lokon'ny sakafo tahirizinao
Ny fonosana vacuum dia fomba fonosana izay manala ny rivotra amin'ny fonosana alohan'ny famehezana. Ity fomba ity dia mahatafiditra (an-tanana na mandeha ho azy) mametraka zavatra ao anaty fonosana plastika plastika, manala ny rivotra avy ao anatiny ary manisy tombo-kase ilay fonosana. Ny sarimihetsika mihena indraindray dia ampiasaina mba hifanaraka tsara amin'ny atiny. Ny tanjon'ny fonosana banga dia matetika ny manala oksizenina ao anaty kaontenera mba hanitarana ny andian'ny sakafo sy, miaraka amina endrika fonosana malefaka, hampihenana ny habetsaky ny atiny sy fonosana.
Ny famonosana vacuum dia mampihena ny oksizenina atmosfera, mametra ny fitomboan'ny bakteria aerôbika na holatra, ary manakana ny fipoahan'ny singa mora miovaova. Izy io koa dia matetika ampiasaina amin'ny fitehirizana sakafo maina mandritra ny fotoana maharitra, toy ny serealy, voanjo, hena sitrana, fromazy, trondro setroka, kafe ary poti-ovy (crisps). Amin'ny fotoana fohy kokoa, ny famonosana ny fako dia azo ampiasaina ihany koa mba hitahirizana sakafo vaovao, toy ny legioma, hena ary ranon-javatra, satria manakana ny fitomboan'ny bakteria izany.
Anaran-javatra Vaccum Kitapo fonosana sakafo
ara-nofo PA / PE, PET / PE, Nylon sns.
Size / hateviny fanao
Application Voankazo / legioma / hazandranomasina / Hena / akoho amam-borona sns
endri-javatra Food / mitambatra ny fanambonin'ny / Microwaved / Strong
FANOMEZANA 30% petra-bola amin'ny T / T, ny ambiny 70% aloa amin'ny faktioran'ny fampakarana entana
Fanaraha-maso kalitao Advanced Equipment and Experienced QC Team dia hijery ireo vokatra, semi-vita ary vokatra vita tanteraka amin'ny dingana rehetra alohan'ny fandefasana
Certificate ISO-9001, tatitra momba ny fitsapana an'ny FDA / tatitra momba ny fitsapana SGS sns.
Serivisy OEM ENY
Ora nanomezana Nalefa tao anatin'ny 15-20 andro taorian'ny fandoavana
Manaraka: Kitapo fonosana vakum-bary
Kitapo fonosana sakafo mahazatra
Kitapo fonosana sakafo
Kitapo plastika fonosana sakafo
Kitapo Ziplock fonosana sakafo